Kedu ihe iwu ịgbazinye pụtara? Nkọwa okwu nke ụkọ ego
Malite mgbazinye ego Wiki Banking Act
Na Banking Act (KWG) bụ iwu German nke nzube ya bụ iwu ahịa na iwu ahịa nke usoro ego.
Iwu Banyere Banyere ọrụ ego na ụlọ ọrụ akwụmụgwọ (lee § 1 para. 1 S. 1, para. 1a S.1, para. 1b).
Isi nzube nke ụlọ ọrụ akwụmụgwọ bụ:
- ichebe ma chekwaa ikike ịrụ ọrụ nke akụ na ụba ego
- nchebe nke ndi nwere ulo oru ulo oru ngo megide onu ego
Akpan akpan, na-egosi na § 6 KWG na ihe aga-eme nke BaFin achịkwakwa (BaFin). BaFin N'ihi ya dị ka § 6 para. 1 maka a na-akpọ institutional elekọta, ya bụ ọrụ ilekọta nke ego na ọrụ na n'aka oru na nke ọzọ na-etiti, na n'ozuzu deplorable obodo nlekọta Finanzleistungs- na kaadị kwesịrị ekwesị arụmọrụ nke ụlọ akụ azụmahịa ma ọ bụ ego ọrụ hụ na iji gbochie omume nke ịrịba ọghọm maka dum aku na uba.
Otú ọ dị, ụdị nlekọta a abụghị iji chebe onye ọ bụla ma ọ bụ onye na-akwụ ụgwọ, ma na-enye nchebe nke ndị akwụmụgwọ niile na mgbasa ozi ha na nkwenye ọha na eze na ikike nke ọrụ ego na ụlọ ọrụ akwụmụgwọ na-arụ ọrụ. A kwadoro Iwu Banyere ego ka ọ bụrụ mmeghachi omume nke nsogbu Banking Banyere 1934 na Germany ma banye n'ime ike otu afọ mgbe e mesịrị n'ụdị mbụ ya.
Iwu Banyere Banyere Iwu na iwu ndị ọzọ na-eme ka mgbochi na-egbochi ụlọ ọrụ akwụmụgwọ, nke na-egbochi ohere maka ụlọ akụ iji were ụfọdụ ihe ize ndụ. A ga-ahazi iwu ndị a na-adabere n'ụdị ihe ize ndụ dị oke:
Ihe ize ndụ dị ize ndụ:
- § 10 KWG; Na-ekwu okwu banyere ihe ize ndụ ndị dị na ngọngọ na ego nke aka (Iwu nkwụnye ego)
- §§ 13, 14 KWG; Ego mgbazinye na mgbazinye nde dollar
Ihe ize ndụ ahịa:
- § 10 KWG; Ọnụ Ahịa Ọnụ Ahịa Ọnụahịa na Ego Maka Onwe Gị
Liquidity ize ndụ:
- § 11 KWG (nke Iwu Liquidity kwuru kpọmkwem)
Ihe ize ndụ:
- § 10 KWG; Ihe ize ndụ na-arụ ọrụ site na ego nke aka (Iwu nkwụnye ego)
- § 13 para. 2 KWG; nnukwu ikpughe
-§§ 15, 17 KWG; ngwa n'aka
-§ 18 KWG; Nnyocha nke ọnọdụ akụ na ụba
-§ 25a KWG; ọrụ nhazi (mgbochi ego laundering, §§ 25b ka 25i KWG)
-MaRisk dị ka mmepe nke § 25a KWG
-§ 32 para. 1 KWG; ikike
- § 23 KWG; mgbasa ozi ban
- §23 a KWG; nkwụnye ego nkwa
-§§ 39, 40 KWG; Nkọwapụta Sparkasse, Bank, Bankier, Volksbank
Iwu Banyere Banyere Iwu bụ nke Bundesbank na BaFin nwere ike ịnweta ozi si na bank ma nwee mmetụta ziri ezi na ụlọ ọrụ akwụmụgwọ.
N'okpuru Iwu Ịkwụ Ụgwọ ahụ, a na-enweta ụgwọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ndị nlekọta:
Ọrụ n'ozuzu inye ozi:
Ozi na nyocha nke ụlọ ọrụ: N'ọnọdụ a, ụlọ akụ nwere ibu ọrụ zuru oke iji nye ihe ọmụma gbasara azụmahịa, ọbụna na-enweghị oge pụrụ iche.
Ozi banyere enweghị ike
- § 10 KWG na iwu Iwu Ịkwụ Ụgwọ: Nke a na-ekwu banyere oke ego nke ego nke ụlọ ọrụ akwụmụgwọ niile. A na-emepụta koodu mkpokọta kwa ọnwa. Ọ dịkwa mkpa iji nyochaa ma kwado ụdị ego.
Ozi gbasara mmiri
§ 11 KWG na njikọ iwu mmiri na-arụ: ọnụahịa nke ụlọ ọrụ akwụmụgwọ na-anọchi anya ya site na nkwadebe nke ọnụ ọgụgụ mmiri ọ bụla kwa ọnwa.
- §§ 13, 13a, 13b KWG: Ịgbazinye agbazinye: Echọrọ ego maka ịkọ nnukwu ego mgbazinye ego ọ bụla na nkeji ọ bụla. Oge enwere akuko maka ụlọ elu akwụmụgwọ nwere ike naanị gafere karịa nkwenye nke BaFin. Ọnụ ego karịa ụlọ elu akwụmụgwọ dị elu ga-edozi ego ọzọ. A na-ahazi iwu ndị ọzọ gbasara ịgbazinye nnukwu ego na Gross- und Millionenkreditverordnung (GroMiKV).
Akụkọ kwa ọnwa na kwa afọ
- § 25 KWG: A ga-eji BaFin mee ihe maka ọnụọgụ akwụkwọ ọnụahịa kwa ọnwa (ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa) na Deutsche Bundesbank.
- § 26 KWG: Ngosi okwu ego, akụkọ nyocha na akụkọ njikwa
Isiokwu bu nke an'ji n'aka